Sida loogu faafiyo TikTok oo aan loogu dhicin isku dayga. - Hanukeii
Isticmaalka dhijitaalka ah ee maanta wuxuu nagu buuxiyaa yaab, iyo sidoo kale hubsiimo la aan mararka qaarkood. Dhammaanteen waxaan u hibeyneynaa qeyb ka mid ah waqtigeenna isticmaalka ballaaran ee shabakadaha bulshada, oo ay ku jiraan mid ka mid ah sahannadii ugu dambeeyay ee Deloitte, waxay xaqiijineysaa in 1 qof 3dii qofba ay fiiriyaan shaashadooda mobilada 7dii daqiiqoba mar, taas oo ah, qiyaastii 150 jeer maalintii. Waa maan-gal.
Waana sababaha ku filan maalin kasta codsiyada cusub iyo alaabada kale ee dhijitaalka ah inay ka soo muuqdaan ciyaarta, iyagoo beddelaya ama dhammaystiraya kuwii hore. Waxyaabaha qosolka leh ee ku saabsan sheekadan oo dhan ayaa ah in hab kasta, si kasta oo aan u adkaysan karno, dhammaanteen waxaan rabnaa inaan halkaas joogno, noqonno fayras, la arko oo la aqoonsado.
Hadda, waxaan jecelnahay inaan isweydiino waxa ku saabsan shabakadaha bulshada ee sida aadka ah u qabatimay? Waxaan jeclaan lahaa inaan helno jawaabta saxda ah, si kastaba ha ahaatee waxay ka gudubtaa naqshadeynta casriga ah iyo qaadista. Dhab ahaantii, waxaan ku dhiiran lahayn inaan u malayno inay la xiriirto luqadda caalamiga ah ee ay gacanta ku hayaan iyo xawaaraha lagu barto nuxurka.
Markaan ka hadlayno luqad caalami ah waxaan ula jeednaa inay tahay mid fudud oo cad. Waxaa loo sameeyay si dadka noocyadiisa kala duwan ay u fahmaan, markaan dhahno qof walba waa QOF KASTA. Iyadoo aan loo eegin luqaddaada, waddankaaga, da'daada ama xirfaddaada. Xagga xawaaraha, waxay si toos ah ugu xiran tahay celceliska dareenka qof ee ku jira internetka, taas oo ah, intee in le'eg ayaad u fiirsataa waxa aad aragto markaad shabakadda baarayso. Caadi ahaan wuxuu u dhexeeyaa 5 ilaa 10 daqiiqo ... laakiin taas sanadihii la soo dhaafay iyo xaddiga macluumaadka muuqaalka ah ee nagu xeeran, waxaan ku dhignay 8 ilbidhiqsi, internetka. Waali!
Mid ka mid ah shabakadaha bulshada ee yaqaana sida laysugu daro labada furaha guusha internetka ayaa aad u wanaagsan TikTok. Waana in markii hore ay ka dhawaajisay sidii hal madal oo kale oo ah nuxurka maqalka ee la adeegsaday saameynta... laakiin hadda, isagu waa kan amraya joojinta aagga inta badan aaladaha dhijitaalka ah ee adduunka ka jira.
Abuuraha TikTok: Zhang Yiming, wuxuu lahaa wax walba oo aad u cad tan iyo 2016. Yaa markaa u kuurgalaya dhaqanka dadka YouTube iyo sheekooyin Bogga Instagram -ka, wuxuu ku ogaaday in dadku ay soo dheereeyaan ama ka boodaan fiidiyowyo, aakhirkana haddii, tusaale ahaan, ujeeddadaadu ahayd inaad internetka ku iibiso, nuxurkan ayaa si fudud loo khasaariyey. Haddaba maxay ahayd xalka ugu macquulsan? Fiidiyowyo ka yar hal daqiiqo, heeso leh laxanka soo noqnoqda oo faafa, dhaqdhaqaaqyo la dardargaliyay. Ilaa maantana, waxay ahayd guul.
Xaqiiqdu waxay tahay in maalmahan aan la adeegsan oo kaliya saameynta ama dadka caanka ah, runtii, noocyada dharka, filimada, fannaaniinta soo ifbaxa, xitaa sababaha bulsheed waxay u arkaan TikTok inay yihiin xulufadooda ugu wanaagsan si ay isu sheegaan.
Adiguna, haddii aad ogtahay inaad haysato wax aad dadka kale ku barato oo ay dadku wax kaa baran karaan, ama xitaa aad rabto inaad dakhli dheeri ah ka soo saarto shabakadaha, TikTok wuxuu noqon karaa xal, kaas oo muddada dhexe iyo muddada dheerba ku raaxaysan kara Faa'iidooyinkaaga. Waa sababtaas awgeed in Hanukeii Waxaan maqaalkan kuugu diyaarinay xoogaa xeelado ah si aad u dumiso cabsida 'algorithm' ... kaliya kaftan, laakiin si aad wax badan ama ka yar u fahanto oo aad u barato inaad la noolaato. Intaa waxaa dheer, waxay noqon doonaan talooyin si aad uga dhex muuqato feed malaayiin isticmaale oo madalkani leeyahay. Diyaar? Aan u tagno.
Qof kasta ayaa akoon ka furi kara TikTok.
Haa ... haddii aad leedahay taleefan casri ah, koonto ka fura TikTok waa amarka maalinta. Si kastaba ha noqotee, ma ahan mid fudud sida dhejinta iyo sugitaanka kuwa raacsan inay cirka ka soo daataan. Waxaa jira falal ka dhigaya waxa aad wadaagto inay fayras noqdaan.
Ka dhig qayb ka mid ah jadwalkaaga.
Wax ciqaabaya algorithm -ka TikTok waa la'aanta joogteynta adeegsadaha, iyo sidoo kale goobjooge ama ciyaartoy ahaan, haddii aadan ku dhex socon biyaha, algorithm -ka ayaa si fudud ku dejin doona. Waxaa lagugula talinayaa inaad maalin walba soo geliso waxyaabaha iyo sidoo kale inaad haysato isla qisada sheekada, sidaa darteed algorithm -ku wuxuu sameyn doonaa sixir wuxuuna kaa caawin doonaa inaad sida ugu dhaqsaha badan u meelayso.
Dhamaadka waxay ku saabsan tahay isbeddellada.
Waa kuwee erayga aan lahayn isbeddel ka badan isbeddelka laftiisa. Sida Twitter -ka ama Instagram -ka, maalin kasta ama toddobaad kasta, waxaa jiri doona erey fure ah oo qeexaya hab -dhaqanka isticmaalaha ugu yaraan celcelis ahaan 72 saacadood.
TikTok -kan ayaa si fiican u yaqaan, sheekooyinka guusha waxay ahaayeen heeso ku xiran qoob -ka -ciyaar gaar ah oo leh dhaqdhaqaaqyo soo noqnoqda, ama maqalka filimka oo lagu dabaqay nolosha dhabta ah. Ugu dambayntii, waxyaabaha ay adeegsadayaashu abuuraan waxay noqdaan wax lagu qoslo ama si quruxsan ayaa loo qaabeeyey, taas oo ka dhigaysa dad badan inay rabaan inay ku celiyaan oo saamaynta domino lama dafiri karo.
Haddii aad ku jirto TikTok, qaybta "Adiga" ayaa ku tusi doonta liiska isbeddellada, waxaad isticmaashaa qaab la mid ah kuwa kale ay isticmaalaan, tusaale ahaan: isla muusigga, dhaqdhaqaaqyada iyo ereyada oo laga yaabee berrito inaad ka soo muuqan doonto feed ee "Adiga."
Waxyaabaha qiimaha leh.
Si aad u bilowdo, waa inaad ku dayataa waxa dadka kale waxoogaa sameeyaan, laakiin mar haddii aad horay u gaadhay dhagaystayaal gaar ah, adeegso isbeddellada, laakiin calaamadee qaabkaaga shaqsiyeed, kaas oo kaa caawin doona inaad sare ugu qaaddo madal.
Adigoo raacaya akoonno waaweyn, isbeddellada ayaa miiskaaga ugu horrayn doona maalinta, fiiri heesta ay adeegsadaan, sida ay ula falgalaan dadka isticmaala, iyo laga yaabee haddii aad abuurto is -dhexgal midkood, waxaad samayn kartaa iskaashi mustaqbalka, noqon lahaa a boost loogu talagalay xisaabtaada.
Tayada oo dhan.
Waxaan ku noolnahay waqti ay tiknoolijiyada iyo bilicsanaantu na siiso dareenka isticmaalka "tayada". Waxaan u noqonay kuwo aad u dalbanaya arrintan oo aanan mar dambe taageeri karin daawashada fiidiyaha oo ah halka tayada sawirku aad u sarreeyo, ama cajaladaha la dulsaaray, ama aan si fudud loo maqlin. Waxaad daabici kartaa wax kasta, waad taqaan inaad dhadhamiso midabada, laakiin haddii aysan ku jirin wax tayo leh, adeegsadayaashu si fudud ayay kuugu gudbin doonaan. Markaa waxaan mar walba ku talinaynaa HD iyo fiidyowyo toosan, labadan saldhig waxaad ku socotaa.
Haddii aad rabto inaad isticmaasho muusikada, noqo deegaan.
Malaha liiska "Isku -darka Maalinlaha ah" Spotify waxaa laga yaabaa inaysan ahayn bedelka ugu fiican haddii hadafkaagu yahay inaad fayras gasho. Waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho muusigga isla App -kan ku siinayo, ku kalsoonow sababta oo ah waa waxa ay dadku codsanayaan oo waliba rabaan inay dhagaystaan. Waxaa laga yaabaa inay kugu dhacday, inaad madaxaaga ku haysato hees cayiman maalintii oo dhan, haddii aad tagto TikTok qaybta "Adiga" waxaa jiri doona dhowr fiidyow oo leh heestaas oo waad awoodi doontaa inaad ogaato yaa ka soo jeeda oo awood u leh inuu ka saaro shakigaas. Cajiib, sax?
Hashtags waligeed kama bixi doonto qaab
Sida aan u adeegsanaynay dhawr sano hashtags Shabakadaha kale ee bulshada, TikTok wuxuu leeyahay afar hashtag oo muhiim ah:
#Adiga #Boggaaga #fyp #parati.
Kuwaan, oo ay weheliyaan kuwaaga shakhsi ahaaneed ee la xiriira waxa ku jira, waxaad ku guuleysan kartaa guul, in haddii, aadan la imaanin qaddarka hashtags in tani sidoo kale lagu ciqaabo algorithm. ISHA.
Jadwalka, waqtiga dhawrista iyo in kale.
Arrinta jadwalladu ma aha saynis gaar ah, laakiin waxa runta ah waa in aad sida ugu badan ee suurtogalka ah u daabacdo waqti isku mid ah, tusaale ahaan: inta u dhaxaysa 11.00 subaxnimo iyo 17.00 galabnimo waa waqtiga ugu fiican, laakiin ha ku daabicin saacadaha wakhtiga nooca: 12.00 galabnimo, ku qaad daqiiqado yar laga yaabee, halkan waqtigu yaqyaqsigu wuu ku xumeeyaa, maadaama, sidaada oo kale, ay jiraan malaayiin isku mid ah, oo haddii aad isla waqtigaas daabacdo isticmaale kale oo leh joogitaan yar, waxa ku jira waa la illoobi doonaa .
La falgal, wadaag oo marna ha ilaawin inaad tahay bani -aadam.
Wax ay hal -abuurayaal badan oo ka kooban ku iloobaan shabakadooda waa kuwa raacsan. Dhab ahaantii, waxay iloobaan inay iyagu ahaayeen kuwii meeleeyay, ee aan ahayn summaddii, ay mar dambe yimaadeen. Sidaa darteed, xitaa haddii aad leedahay tiro aad u tiro badan oo raacsan, la falgal oo u naxariiso, taasi waa la mahadiyey oo daacad u ah isticmaalehaaga.
Ka jawaab su'aalahooda ku saabsan alaabta aad isticmaasho, meesha aad joogto, oo xitaa soo celi salaanta waxaadna arki doontaa in waqti ka dib kuwii kula joogay bilowgii, ay sii ahaan doonaan markii aad xukumaan malaayiinta qof ee raacsan App -ka.
Waxaa laga yaabaa inaysan ahayn qaaciddada sixirka in lagu faafiyo TikTok, laakiin waa barta aad ka bilaabi karto sahaminta iyo ka faa'iideysiga hal -abuurkaaga si adeegsadayaasha kale kuu ogaadaan. Waxaad u abuuri kartaa nuxurka moodadaas oo aad had iyo jeer rabtay qaab asal ah, sidii inaad u sheegi lahayd asxaabtaada, taasi waa furaha ugu fiican. Ama xitaa barashada qurxinta, maxaa yeelay maya, xitaa haddii aadan si buuxda ugu sharxi karin habka 15 ilbidhiqsi, waxaad tusi kartaa natiijada kama dambaysta ah oo dadka xiiseynaya waxay arki karaan astaantaada boggaaga gaarka ah ama kanaalka YouTube.
Marka la soo koobo, waa ilo aan gacanta ku hayno oo ay fiicnaan lahayd in la ogaado sida loo isticmaalo. Waxaan rajaynaynaa inaad ka heshay qoraalkan sidaan u jeclayn oo ay waxtar kuu leedahay.